तपाईलाई थाहा छ विवाह शब्दले युवतीहरुमा यस्ता डर उत्पन्न गराउँछ ? | Rajmarga
हरेक मान्छेको जीन्दगीमा विवाह एक महत्वपूर्ण निर्णय हो । विवाहपछि मानिसको जीन्दगीमा आमूल परिवर्तन आउँछ । आफूलाई एक्लो महशुस गर्ने मान्छेको सम्बन्धको दायरा सोचेभन्दा फराकिलो बन्छ । हाम्रो समाजमा विवाहलाई जरुरी मानिन्छ ।
यो कुरा साँचो हो कि विवाह बंधनमा बाँधिएपछि दुई अन्जान व्यक्ति एकअर्काको बन्न पुग्छन् र आफ्नो पूरा जीन्दगी एकसाथ विताउँछन् । यो सम्बन्ध प्रेम, भरोसा, आपसी समझ र सहयोगको हुने गर्दछ । यिनै चिजहरुबाट वैवाहिक सम्बन्धलाई खुसी र सुखमय बनाउन सकिन्छ । फेरि पनि विवाह भन्ने चीजबाट धेरै युवतीहरु डराउँछन् । उनीहरु डराउनुको कारण के हो त ?
Previous post: यस्ता रहेछन् युवा पुस्ताले जोतिषसँग राख्ने सबैभन्दा बढी जिज्ञासा
Next post: ट्रम्पको नयाँ नीतिले चीन–अमेरिका व्यापारमा देखियो यस्तो असर